बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री सनी लियोलीले नेपाली फिल्म पासर्वडमा आइटम डान्स गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिईन् ! – Medianp
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री सनी लियोलीले नेपाली फिल्म पासर्वडमा आइटम डान्स गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिईन् !
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १८, २०७५१२:१४0
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र पासवर्डको आइटम डान्सको लागि बलिउड अभिनेत्री सनी लियोलीलाइ ल्याउने भएको छ । एबी इन्टरनेशनल र अडबल मोसन पिक्चर्सले निमार्ण गर्ने यस चलचित्रको लन्डनमा छायांकन हुने निमार्ण टिमले जनाएको छ ।
यस चलचित्रमा नायक रुपमा अनुप विक्रम साही र सनी लियोनी लगायतका केही नेपालका चर्चित कलाकारहरु रहेका छन भने यसको सम्राट बस्नेतले निर्देशन गर्दै छन । साथै यसमा नेपाली र विदेशको दुवै संस्कृतिलाइ जोडने विषयवस्तु भएकाले बलिउडको कलाकारलाइ पनि समेटेको जनाएको छ ।
यसै क्रममा नेपाली फिल्मको गीतमा आइटम डान्सको लागि छानिएकी बलिउड अभिनेत्री सनी लियोलीले पनि खुसी व्यक्त गरेकी छिन् । उनले एक ट्वीट गदै लेखिन्“ आउँदै गरेको बहुप्रतिक्षित नेपाली फिल्म पासवर्डको यो डान्स नम्बरको हिस्सा हुन पाएकोमा निकै खुसी छु” भनेर ट्वीट गरेकी छिन । सनीको यो आइटम डान्स आगामी नेपाली फिल्म पासवर्डमा हुनेछ । कस्तो हुन्छ त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
बलिउडकी चर्चित नायिका सोनाक्षी सिन्हाले ऋतिक रोशनसँग विवाह गर्न चाहेको खुलासा गरिन्
एक विवाहित महिलाले पैसाको लोभमा जन्मने बित्तिकै आफ्नो बच्चा बेचिन् , कारण यस्तो थियो, खुलासा भएपछि सबैजना अचम्मित
प्रियंका पछि नायिका बेनिशा हमाल पनि इन्डोनेसियाको बालीमा रमाउँदै, को हुन् उनीसँग छुट्टी मनाउने निर्देशक ? १० तस्विरमा हेर्नुहोस
नेपाली हिरोइनले छोटो लगाउँदा किन पाउँछन् सँधै गालि ?
धेरै पढेका ७ नेपाली कलाकारहरु को को हुन् ? कसको पढाई कति ?(तस्विर)